नयाँ वर्षमा घुम्ने ९ गन्तव्य – Sajha Achham
२०७९ जेष्ठ ४ बुधबार १२ बजे ४१ मिनेट
नयाँ वर्षमा घुम्ने ९ गन्तव्य
काठमाडाैं- गत वर्षदेखि शुरू भएको कोरोना महामारीको सन्त्रास बढ्दै र घट्दै फेरि बढ्न थालेको छ। महामारीको सबभन्दा मारमा परेको छ, पर्यटन क्षेत्र। किनभने घुमघाम अवरुद्ध छ। एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्कोतर्फ यसबाट सिर्जित आर्थिक समस्या। तर, महामारीबीच पनि जीवन त चल्छ नै। त्यसैगरी, विस्तारै घुमघाम पनि बढ्दो छ।
महामारीकै बीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी अपनाएर घुमघामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। नयाँ वर्ष शुरु भएको छ। घुमघामका पारखीले यहीबेला आफ्नो शोख पूरा गर्ने प्रयास गर्छन् पनि। यो न धेरै गर्मी, न धेरै जाडो, न पानी पर्ने, घुम्नका लागि उपयुक्त मौसम पनि हो। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सात प्रदेशका ९ वटा गन्तव्य सिफारिस गरेका छौं। आन्तरिक पर्यटकले रुचाएका, लामो र छोटो दुवैखाले गन्तव्य यसमा समेटिएका छन्।
नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको प्रमुख रोजाइमध्येको एक हो- सगरमाथा क्षेत्रको पदयात्रा। तर, पछिल्लो समय यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको पनि रोजाइमा परेको छ। पदयात्रा रुचाउनेका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरसम्मको यात्रा रोमाञ्चक हुन्छ नै। यो हिमाली क्षेत्रको उत्कृष्ट अनुभवसमेत हुने लुक्लाका पर्यटन व्यवसायी आङ्टासी शेर्पा बताउँछन्।
सगरमाथा क्षेत्रमा विभिन्न पदमार्ग छन्। तर, आँखै अगाडि संसारकै अग्लो शिखर हेर्नका लागि कालापत्थर सर्वाधिक उपयुक्त स्थान हो। समुद्री सतहबाट ५ हजार ५५५ मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउँबाट सगरमाथासँगै अन्य हिमाललाई ३६० डिग्रीमा हेर्न सकिन्छ।
सगरमाथा पदयात्राका लागि काठमाडौंदेखि सोलुखुम्बुको लुक्लासम्म हवाई यात्रा गर्नुपर्छ। त्यसपछि पदयात्रा शुरु हुन्छ। यसका लागि जम्मा दुई साताको समय छुट्याउनुपर्छ।
ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो पाथीभरा। पाथीभरा मन्दिर हिन्दू एवं बौद्धहरूको महत्वपूर्ण धार्मिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ। सदरमुकाम फुङ्गलिङबाट १९ किलोमिटर पूर्वोत्तर रहेको यो मन्दिरमा वर्षभरि भक्तजनको भीड लाग्छ। ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर समुद्र सतहबाट ३ हजार ७९४ मिटर उचाइमा छ।
अन्नले भरिभराउ पाथी जस्तै सुन्दर छ पाथीभरा। मनमोहक आकृति बोकेको यो ठाउँमा पहाडको टुप्पोमा देवीको उत्पत्तिस्थल रहेको विश्वास गरिन्छ। त्यही भएर ती देवीलाई पाथीभरा देवीका नामले पुकारिन्छ।
ताप्लेजुङका रैथाने लिम्बू समुदाय पाथीभरालाई मुक्तुबुङू भनेर चिन्दछन्। लिम्बू भाषामा ‘मुक्तु’को अर्थ शक्ति वा बल, ‘बुङू’को अर्थ बोट भन्ने जनाउँछ। अर्थात लिम्बू समुदायले पाथीभरालाई शक्ति वा बलको श्रोत मान्ने गर्छ।
ताप्लेजुङ विकट क्षेत्र भएपनि अब त्यहाँसम्म पुग्न त्यति कठिनाइ छैन। काठमाडौंदेखि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङसम्म बस चल्छ। त्यहाँबाट फेदीसम्म जिपमा गएर त्यसपछि पैदल ४ घण्टा उकालो यात्रा तय गरेर पाथीभरा पुग्न सकिन्छ। अथवा काठमाडौंदेखि ताप्लेजुङको सुकेटारसम्म हवाईजहाज चल्छ। त्यसपछि जिपमा तल्लो फेदीसम्म जान सकिन्छ।
प्राचीन मिथिलाको राजधानी हो, जनकपुर। जनकपुरको जानकी मन्दिर प्रदेश–२ को प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले धनी मानिने मैथिल सभ्यताको धरोहरको रूपमा रहेको यो मन्दिर हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थलमा पर्दछ।मुगल शैलीमा निर्मित जानकी मन्दिर कलाकौशलका हिसाबले पनि भव्य र आकर्षक छ। जानकी मन्दिरलाई नेपाल सरकारले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न प्रयास गरिरहेको छ। राममन्दिर, गंगासागर पोखरी जनकपुरका थप आकर्षण हुन्। यहाँको रीतिरिवाज, संस्कृति र खानपान त आकर्षणको केन्द्र हुने नै भए।
काठमाडौंबाट २६५ किलोमिटर दूरीमा रहेको जनकपुर आठ घण्टाको बस यात्रामा पुगिन्छ। काठमाडौंबाट जनकपुर सीधा हवाइसेवाले पनि जोडिएको छ।
प्राकृतिक सुन्दरतादेखि हिमाली दृष्यावलोकनका लागि काठमाडौंबाट सहजै पुग्न सकिने स्थान हो, नगरकोट। सूर्योदय र सूर्यास्तको रमणीय दृश्यावलोकन गर्न नगरकोट विश्वका उत्कृष्ट दश स्थानमध्येमा पर्छ।
यहाँबाट लाङटाङ, दोर्जे लाक्पा, गणेश, चो यू, गौरीशंकर लगायत हिमाल मात्र होइन, मौसम खुला भएको बेला संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा समेत हेर्न सकिन्छ। नगरकोटबाट साँखु, धुलिखेल र चिसापानीसम्म गर्न सकिने हाइकिङ पनि प्रख्यात छ।
काठमाडौंदेखि भक्तपुरको कमलविनायक हुँदै सार्वजनिक बसबाट नगरकोट पुग्न सकिन्छ। निजी सवारी साधनमा जाँदा काठमाडौंबाट एक घण्टामा नगरकोट पुगिन्छ।
५. मुक्तिनाथ, मुस्ताङ
हिमाली भूगोलका मनोरम दृश्य, पृथक भूगोल, हिमाली जीवनशैली, धार्मिक सम्पदा मुस्ताङका प्रमुख आकर्षण हुन्। मुस्ताङलाई हिमालपारिको जिल्ला पनि भनिन्छ। विदेशी पर्यटकमाझ अन्नपूर्ण पदमार्गका कारण प्रख्यात यो जिल्लाको मुक्तिनाथ आन्तरिक पर्यटकका लागि भने धार्मिक आस्थाको केन्द्र बनेको छ। मुक्तिनाथ क्षेत्र हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मवलम्बीको साझा तीर्थस्थल हो। नेपाल मात्र होइन, भारतबाट समेत यहाँ तीर्थालुको भीड लाग्छ।
मुस्ताङ जाने अधिकांश पर्यटकले सदरमुकाम जोमसोमदेखि तीन घण्टाको पैदल यात्रामा पुगिने कागबेनीसम्मको तल्लो मुस्ताङको यात्रा रुचाउँछन्। विकट भू-बनोट रहेको उपल्लो मुस्ताङ तिब्बती रहनसहन र संस्कृतिको भण्डार पनि हो। यहाँ प्राचीन गुम्बाहरू, स्तूपा आदि दर्शनीय मानिन्छन्।
काठमाडौंदेखि निजी सवारी साधनमा मुस्ताङ जान सकिन्छ। पोखरा–जोमसोम दैनिक हवाईजहाज पनि सञ्चालनमा छ। त्यहाँ चार्टर्ड फ्लाइट पनि भइरहन्छन्।
कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा अवस्थित राराताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो। समुद्री सतहबाट २ हजार ९९० मिटर उचाइमा अवस्थित रारा ताल रारा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै रहेको छ। तालछउमै एउटा होटल छ, २० मिनेटको दूरीमा होमस्टे पनि सञ्चालनमा छन्। यी होटलका कोठाहरुबाहेक टेण्टमा पनि पाहुनालाई बास बसाइन्छ। रारा तालको गहिराई १६७ मिटर छ।
पश्चिम नेपालको प्रवेशद्धार मानिने नेपालगन्जको राँझा विमानस्थलबाट सिधै मुगुको ताल्चा विमानस्थलसम्म हवाईजहाजमा पुग्न सकिन्छ। तत्पश्चात रारा तालको किनारमा पुग्न तीन घण्टाको पैदल यात्रा तय गर्नुपर्छ। सुर्खेतबाट मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म सार्वजनिक बस चल्छन्। त्यहाँबाट दुई घण्टाको यात्रामा राराताल पुग्न सकिन्छ।
प्युठानको स्वर्गद्वारीको आफ्नै महत्व छ। यो धार्मिकसँगै प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी पनि हो। पुराण अनुसार पाँच पाण्डवले स्वर्ग जाँदा अन्तिममा प्रयोग गरेको बाटो मानेर यसको नाम स्वर्गद्वारी रहन गएको हो। यहाँबाट अन्नपूर्ण, धौलागिरि, मनास्लु लगायतका हिमाल हेर्न सकिन्छ।
काठमाडौंबाट रोल्पा जाने बस चढेर प्युठानको भिंग्री पुग्न सकिन्छ। त्यहाँबाट तीन घण्टाको पैदल यात्रामा स्वर्गद्वारी आइपुग्छ। निजी सवारीसाधन भए त सिधै स्वर्गद्वारी मन्दिरसम्मै पुग्न सकिन्छ। योबाहेक हवाइ यात्राका लागि पनि सजिलो छ। काठमाडौंबाट नेपालगन्जसम्म वा भैरहवासम्म हवाइजहाजमा गएर त्यहाँबाट बसमा पनि स्वर्गद्वारी पुग्न सकिन्छ।
८. सिंजा उपत्यका
नेपाली खस भाषा र संस्कृतिको उद्‌गम थलो मानिने जुम्लाको सिंजा उपत्यका ऐतिहासिक ठाउँ हो। वरिपरि पहाडले घेरेको समथर ठाउँमा तिला नदीको दायाँ–बायाँ गुजुमुज्ज बसेको बस्ती नै नेपालीभाषाको उद्‌गमथलो सिंजा हो।
कुनै बेलाका बाइसे, चौबीसे राज्यमध्येको शक्तिशाली राज्यको पहिचान बोकेको सिंजा देशको सबैभन्दा ठूलो ताल रारा जाने बाटोमा पर्छ। सिंजा पुगेपछि त्यहाँबाट तीन घण्टाको बसयात्रामा पुगिने खलंगा बजारमा अवस्थित चन्दननाथ मन्दिर जुम्लाको अर्को आकर्षण हो।
नेपालगञ्जबाट ४५ मिनेटको हवाई यात्रापछि जुम्लाको खलंगा र त्यहाँबाट सवारी साधनमा तीन घण्टाको यात्रामा सिंजा उपत्यका पुग्न सकिन्छ। यसबाहेक सुर्खेतदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा १२ घण्टाको यात्रापछि सिंजा पुगिन्छ।
खप्तडलाई धेरैले भू-स्वर्ग भन्छन् अर्थात् धर्तीको स्वर्ग। प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम उपहार हो, खप्तड। विगतमा यो याममा हरियाली हुने भए पनि यो वर्ष धेरै हिउँ परेकाले प्रकृति धेरै खुलेको छैन। तर, पनि यसको सौन्दर्य उस्तै छ।
खप्तड क्षेत्रमा खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी, खप्पर दह, शिवमन्दिर, सहस्रलिंग, केदारढुंगा जस्ता धार्मिक स्थलहरू दर्शनीय छन्। ठूला–साना गरी २२ वटा फाँट पनि यहाँका आकर्षण हुन्।
काठमाडौंबाट धनगढीसम्म हवाइजहाजमा पुग्न सकिन्छ। वा काठमाडौंदेखि ६५० किलोमिटर बस यात्रापछि धनगढी पुगिन्छ। त्यहाँबाट बसमा आठ घण्टामा डोटीको सिलगढी, सिलगढीबाट जीप रिजर्भ गरेर करीब चार घण्टामा खप्तडको प्रवेशद्वार झिग्राना पुगेपछि पैदलयात्रा शुरु हुन्छ। झिग्रनादेखि त्यहाँबाट पैदल एक दिनमा खप्तडको त्रिवेणी पुगिन्छ।